तपाईंको साइटलाई अधिक अनुकूलित नगर्नुहोस् - Semalt बाट अभ्यास गर्नुहोस्
ओलिभर किंग, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, भन्छन कि ओभर अप्टिमाइजेसन धेरै SEO युक्तिहरू प्रयोग गर्ने अभ्यास हो जुन अन्तत: साइटको श्रेणीलाई क्षमता नष्ट गर्न थाल्छ। खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) ले खोज इन्जिन परिणामहरूमा तपाईंको वेबसाइटको दृश्यतामा असर गर्छ, तर अधिक अनुकूलनले तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा जैविक यातायात चलाउन सक्दैन। यहाँ अत्यधिक अप्टिमाइजेसनको बारेमा तपाईलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा छ।
१. आन्तरिक लि for्कहरूको लागि कीवर्ड-रिच एch्कर पाठ:
आन्तरिक लिंकिंग राम्रो छ तर किवर्ड युक्त एch्कर पाठको प्रयोगले तपाईंको वेबसाइटलाई फाइदा लिन सक्दैन। तपाईंले याद गर्नुपर्दछ कि एन्करले गन्तव्यको यूआरएल प्रयोग गर्दछ र लंगर जसले धेरै किवर्डहरू प्रयोग गर्दछ तपाईंको साइटको लागि खराब हो। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि त्यस्ता लिंकहरूसँग जानका लागि उपयोगी छ भने, तपाईंले यो बिर्सनु हुँदैन कि हामी ओभर-अनुकूलनको बारेमा छलफल गरिरहेका छौं। कहिलेकाँही ए an्करहरू जुन URL हरूसँग मिल्छ सकारात्मक एसईओमा योगदान गर्दछ। जे होस्, यदि तपाइँ प्रक्रियालाई बारम्बार दोहोर्याउनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको साइटलाई अनुकूलन गर्दै हुनुहुन्छ, जुन यसको खोज इञ्जिन परिणामहरूको लागि भयानक छ।
२ अप्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरू
तपाईंले अप्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग गरेर तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक ड्राइभ गर्नु हुँदैन। त्यहाँ समयहरू थिए जब वेबमास्टरहरूले वयस्क-थीम भएका कुञ्जी शव्दहरू उनीहरूको लेखहरूमा राख्थे केही सर्च इञ्जिन ट्राफिक प्राप्त गर्न, तर वयस्क सामग्री सहितको कुनै पनि वेबसाइट लामो समयसम्म बाँच्न सक्दैन। यो अत्यधिक अनुकूलन को एक उदाहरण मात्र हो; तपाईंले कहिले पनि गैर-प्रासंगिक कुञ्जी शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न र कुनै पनि मूल्यमा कम-गुणवत्ता लेखहरू लेख्नुहुन्न। गुगल र याहू तपाईंको वेबसाइटको रूपमा, ती सबै प्राथमिक कुञ्जी शब्दहरू विचार गर्दछन् जुन तपाईंले आफ्नो पोष्टहरूमा प्रयोग गर्नुभयो। यदि तपाईंले असंबद्ध कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो भने, खोज ईन्जिनहरूले तपाईंको साइटको दर्जालाई कहिले पनि सुधार गर्दैन।
The. आन्तरिक र बाह्य लिंकहरू औंल्याउनुहोस्:
यो उल्लेख गर्न सुरक्षित छ कि कडा लिंकहरूले सँधै गहिरो आन्तरिक र बाहिरी पृष्ठहरूमा सूचित गर्दछ। प्राय: जसो वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरूले अप्रासंगिक लिंकहरू प्रयोग गर्छन् र गृहपृष्ठहरू वा शीर्ष-स्तर नेभिगेसन पृष्ठहरूमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न कोशिस गर्छन्। त्यस्ता वेबसाइटहरूको लागि, गृहपृष्ठ लिंकहरूको दर सँधै औसतभन्दा उच्च हुन्छ। यसैले तपाईले क्वालिटी ब्याकलि build्क निर्माण गर्नुपर्दछ, यो सुनिश्चित गर्दै कि तपाइँका सबै लेखहरू खोज ईन्जिन नतीजाहरूमा अनुक्रमित छन्।
Different. विभिन्न पृष्ठहरूमा H1 को उपयोग:
तपाईले आफ्नो वेबसाइटको मुख्य पृष्ठमा H1 कहिले पनि प्रयोग गर्नुहुन्न। दुर्भाग्यवस, विभिन्न ब्लगरहरू विश्वास गर्छन् कि सेतो टोपी एसईओको अर्थ धेरै हेडिंगहरू प्रयोग गर्नु हो, तर त्यो सत्य होइन। यदि तपाइँ एकल लेखमा एक भन्दा बढि H1 ट्याग प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाइँ यसलाई अधिक अनुकूलित गर्दै हुनुहुन्छ।
To. विषाक्त वेबसाइटहरूका लागि लिंक:
वेबसाइटहरू जुन तपाईंले लिंक गर्नुहुनेछ आवश्यक छ र गैर-विषाक्त हुनुपर्छ। बिभिन्न वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरू लिंकको खतराको बारेमा बेवास्ता गर्दछन्। तिनीहरू आफ्ना लेखहरूलाई मालिसियस पृष्ठहरू र कम-डीए वेबसाइटहरूमा लिंक गर्न जारी राख्छन्। यदि तपाइँ तपाइँको साइटलाई विषाक्त वेब पृष्ठहरुमा लि link्क गर्नुहुन्छ, संभावना छ कि तपाइँ कालो टोपी एसईओ प्रतिक्रियाहरू पाउनुहुनेछ।
Key. कीवर्ड भरिएको निष्कर्ष:
तपाईंको लेखहरूको फुटर धेरै कुञ्जी शब्दहरूबाट स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। फुटरलाई अधिक अनुकूलन एक कालो टोपी एसईओ अभ्यास हो, त्यसैले तपाईंले यस भागमा दुई भन्दा बढि कुञ्जी शब्दहरू कहिले पनि प्रयोग गर्नुहुन्न। प्रमाणले पत्ता लगायो कि गुगल र याहूले फुटर लि dev्कको अवमूल्यन गर्दछ र कीवर्ड स्टफिंगको साथ वेबसाइटहरूलाई दण्ड दिन्छ।
त्यहाँ अधिक अप्टिमाइजेसनको साथमा विभिन्न अन्तर्निहित समस्याहरू छन्। यदि तपाइँ प्राविधिक SEO मा धेरै ध्यान दिनुहुन्छ र धेरै संख्यामा कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने, खोज ईन्जिनहरूले तपाइँको वेबसाइटलाई आजीवन प्रतिबन्ध लगाउन सक्दछ। उत्तम SEO अभ्यासहरूको साथ एक वेबसाइट बनाउनु सफलताको एक मात्र तरीका हो।